विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै - नेपालबहस
विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै
२८ जेठ २०७८ | १०:३३:०८ मा प्रकाशित
२८ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप-२०२२ तथा एसियन कप-२०२३ अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज ‘शुक्रबार’ अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
कुवेत सिटीस्थित जाबेर अल अहमद अन्तराष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले अष्ट्रेलियासँग खेल्नेछ । अष्ट्रेलिया र नेपालबीचको खेल राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । एसियाली फुटबलको पावरहाउस अष्ट्रेलियालाई पराजित गर्नु नेपाललाई फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।
तर, नेपाल अष्ट्रेलियासँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजनामा रहेको छ । नेपालको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरीले अष्ट्रेलियासँग राम्रो खेल पस्कने बताएका छन् ।
नेपालले विश्वकप छनोटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाईसकेको छ । तर, नेपालको प्ले अफको माध्यमबाट एसियन कप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी रहेको छ ।
यस्तै प्रशिक्षक अलमुताईरीले अष्ट्रेलियाविरुद्ध युवा खेलाडीले मौका पाउने समेत बताए । पाँच पटक विश्वकप खेलिसकेको अष्ट्रेलिया भने नेपाललाई हराएर विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्न चाहन्छ ।
अष्ट्रेलियाका मुख्य प्रशिक्षक ग्राहम आर्नोल्डले नेपाली टिम मेहेनती टिम भएको बताउँदै आर्नोल्डले नेपालसँग खेल्न उत्साहित रहेको बताउँछन् ।
यस्तै प्रशिक्षक आर्नोल्डले नेपालविरुद्धको खेलमा सुरुवाती-११ मा परिवर्तन हुने समेत बताए । समूह ‘बी’ मा अष्ट्रेलिया १८ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अष्ट्रेलिया अपराजित रहने समूहको एक्लो टिम हो ।
नेपाल भने चौंथो स्थानमा रहेको छ । नेपालले ६ अंक जोडेको छ । जारी छनोटमा नेपालले यस अघि चाईनिज ताईपेलाई २-० ले हराएको थियो । तर, नेपाल जोर्डनसँग ३(० ले पराजित भएको थियो ।
युरोकप फुटबलमा आज तीन खेल हुँदै, कसले मार्ला बाजी ? ३ दिन पहिले
विश्वकपको छनोट: पहिलो हाफमा नेपाल १-० ले पछाडी १ हप्ता पहिले
विश्वकप छनोटमा नेपालद्धारा ताइपेई २–० गोलअन्तरले पराजित २ हप्ता पहिले
विश्वकप छनोट:चिनियाँ ताइपेई विरुद्ध नेपालको जित २ हप्ता पहिले
रियल मड्रिडको मुख्य प्रशिक्षकमा कार्लो एन्सेलोटी २ हप्ता पहिले
पहिरो खस्दा जयपृथ्वी राजमार्ग २ दिनदेखि अवरुद्ध भर्खरै
व्यासमा पहिराेको जोखिममा दुई घर ७ मिनेट पहिले
दोर्दी खोलाले १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा ९ मिनेट पहिले
बाढीले पक्की पुल क्षति, सडक सम्पर्क टुट्यो १७ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना २२ मिनेट पहिले
पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास २७ मिनेट पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध ३० मिनेट पहिले
बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न तरुण दलको निर्देशन ३० मिनेट पहिले
सडकका किनारामा तरकारी बिक्री गर्दै महिला ३४ मिनेट पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा ३७ मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? ४८ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति निश्प्रभावी, धेरै राष्ट्रले पत्रको जवाफ समेत फर्काएनन् ४९ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ५९ मिनेट पहिले
मुगुमा प्रवासी नेपालीद्धारा अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग २० घण्टा पहिले
बहुमत देखाउन ठाकुरले थपे कार्यकारिणी समितिमा १७ जना ५ घण्टा पहिले
नारायणीमा पानीको वहावले पार ग¥यो खतराको विन्दु १७ घण्टा पहिले
मनसुन सक्रिय भएसंगै सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह ३ घण्टा पहिले
एनसीसी बैंकको ९ लाख कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा ४ घण्टा पहिले
प्रदेश नं २ सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट [ पूर्णपाठ ] १८ घण्टा पहिले
सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढ्यो ५ दिन पहिले
भारतबाट आएका ४० हात्ती बर्दिया राष्ट्रिय निकञ्जमा पसे ५ दिन पहिले
कानून व्यवसायीलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन डिएलएको माग १ हप्ता पहिले
व्यापारी दम्पतीको हत्या आरोपित सात वर्षपछि पक्राउ ३ दिन पहिले
म्याग्दीमा बाढीले ७ आवास भवन र २ नर्सरीमा क्षति ४ दिन पहिले
एक दर्जन कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति ? ६ दिन पहिले
हावाहुरी पीडितलाई जस्तापाता वितरण २ हप्ता पहिले
अपराधीका हातमा सत्ता, शिक्षा र स्वास्थ्य ! ४ हप्ता पहिले
ईश्वर पोखरेल अब पार्टीको काममा सक्रिय हुने १ हप्ता पहिले
दमौली अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट जडान अन्तिम चरणमा ३ हप्ता पहिले
संसदमा प्रधानमन्त्रीमा भने यस वर्ष आधार, अर्को वर्षदेखि उपलब्धि [ हेर्नुस पूर्ण पाठ ] १ वर्ष पहिले
एक वर्षमा एक करोडका माछा ! १ वर्ष पहिले
यो वर्ष कांग्रेसले चियापान नगर्ने ८ महिना पहिले